Ninja vs ဆာမူရိုင်း။ သူကားအဘယ်သူဆွတ်ခူး? အဘယ်သူသည် သာ. ကောင်း၏ပါသလဲ - Samurai Ninja Museum
Ninja vs ဆာမူရိုင်း။ သူကားအဘယ်သူဆွတ်ခူး? အဘယ်သူသည် သာ. ကောင်း၏ပါသလဲ
ဆာမူရိုင်း vs. Ninja ။ သူတို့အဘယ်သူသည်အနိုင်ရရှိ, စစ်တိုက်ခြင်း အကယ်. ?
a “ကို 1-1” ရန်ပွဲအတွင်းဆာမူရိုင်းအလွယ်တကူအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။4အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်:
1- ဆာမူရိုင်း2ဓား (katana နှင့် wakizashi) posses နိုင်ဘူး။ Ninja များသောအားဖြင့်မည်သည့်ဓားယူမသွားခဲ့ပါဘူး။ တချို့ကနင်ဂျာသာ 1 တိုတောင်းထားကိုထားခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ katana ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဓားကိုဖြစ်ပါတယ်။
3-ဆာမူရိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးတိုက်ပွဲများပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိဖြစ်ကြသည်။ Ninja သူလျှိုနှင့်လျှို့ဝှက်တိုက်ပွဲများအတွက်အထူးပြု။
4- အဆိုပါဆာမူရိုင်းတိုက်ခိုက်နေ မှလွဲ. မည်သည့်အလုပ်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ Ninja လယ်သမားဖြစ်ကြသည်။ ဆာမူရိုင်းစစ်တိုက်ခြင်းငှါပိုကောင်းပြင်ဆင်ထားကြသည်။
တစ်ဦးကြမ်းတမ်းမြေပြင်အနေအထား, ဒါမှမဟုတ်တောင်တော်ဧရိယာ၌ခုနှစ်, Ninja ကိုအုပျစုအနိုင်ရလိမ့်မည်။ Ninja ကိုသေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစုအဖြစ်ပိုကောင်းရှင်သန်မှုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့-အုပ်စုတစ်စုရန်ပွဲဖြစ်ပြီးလျှင်, ဆာမူရိုင်းအလွယ်တကူအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
Ninja ကိုနှင့်ဆာမူရိုင်းများသောအားဖြင့်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတဘက်၌မတိုက်ကြဘူး။ သို့သျောလညျးအခြို့သောအခါသမယ၌, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတိုက်ကြ၏။ ထိုအချိန်ကာလအများစုမှာဆာမူရိုင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Tensho-IGA (1581) ၏စစ်ကာလအတွင်း Ninja ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်ဆာမူရိုင်း (ODA Nobunaga ၏တပ်ဖွဲ့များက) ကပျက်စီးခဲ့သည်။ Ninja ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြသော်လည်း, သူတို့ရဲ့ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုဆာမူရိုင်းအထင်ကြီး။ အဆိုပါဆာမူရိုင်း 1581 အပြီး Ninja ကိုသူလျှိုသုံးပြီးစတင်ခဲ့သည်။
Categoriesဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja (Burmese) TagsNinja, ဆာမူရိုင်း, ဆာမူရိုင်းနှိုင်းယှဉ် Ninja ကို, ပိုကောင်းတဲ့သူက
Previous PostPrevious Ninja vs Samurai. Хэн ялах вэ? Хэн илүү сайн бэ?
Next PostNext सामुराई बनाम निन्जा। कसले जित्छ? राम्रो को हो?